साउदीमा पूर्णबहादुरको व्यथा : भिसा ट्रक ड्राइभरको, काम उँट गोठालोको | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार २१, २०७५ बिहिबार १३:२२:२३ | रीतु थेबे
काठमाडौं – बुधबार १० बजे बिहान (४ जुलाईका दिन) साउदी अरबको तापक्रम ४० डिग्री थियो । त्यतिबेला फोन गर्दा पूर्णबहादुर गुरुङ मरुभूमिको तातो हावा खाँदै उँटलाई दानापानी दिँदै हुनुहुन्थ्यो । फोनमै पूर्णबहादुरले भन्नुभयो, ‘म उँटलाई दानापानी खुवाउँदै छु । १५ मिनेटपछि कुरा गरौंला सर ।’
कास्कीको लेखनाथ उपमहानगरपालिका १ का पूर्णबहादुरले साउदीमा उँट चराउन थालेको दुई महिना पूरा भयो । नेपालमा छँदा उहाँको हात गाडीको स्टेयरिङमा बसेको थियो । पोखरा आसपासमा माइक्रो र ट्याक्सी चलाउनु हुन्थ्यो । परिबन्दले ४० वर्षे पूर्णबहादुरका हातले खाडीको देशमा उँट स्याहार्नु पर्ने भयो ।
चार वटा दुहुनासहित २३ वटा उँट स्याहार्ने जिम्मा छ पूर्णबहादुरलाई । उँट दुहुने, चराउने, दानापानी र कुँडो खुवाउने कामले पूर्णबहादुरलाई थकाई मार्ने समय पनि हुँदैन । न मुदिरले काम गर्ने ‘टाइम’ नै तोकिदिएको छ ।
हुनलाई गाडी चलाउने कामकै लागि पूर्णबहादुर साउदी जानुभएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागबाट ३१ अगष्ट, २०१६ मा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएर ट्रक ड्राइभरको भिसामा पूर्णबहादुर साउदीको रियादस्थित एनओसी हुसेन अल मुतैरी रेन्टल अफ हेभी इक्युपमेन्ट कम्पनी पुग्नुभयो ।
पटक पटक आफूलाई साउदी पठाउने काठमाडौंको कान्तिपुर म्यानपावर सर्भिस प्रालिमा सम्पर्क गर्नुभयो, तर कम्पनीले उहाँका कुरा सुनेन । नेपाल फर्कन चाहे पनि फर्काइ दिएन । तलब सुविधा र लाइसेन्सका लागि पहल गर्नुको साटो म्यानपावरले कम्पनी मालिकको बुबाको मजरामा लगेर उँट गोठालो बनाइदियो ।
तर साउदीमा नेपाली लाइसेन्स देखाएर गाडी चलाउन पाइदैन । गाडी चलाउने त्यहीको लाइसेन्स हातमा थिएन । कम्पनीले लाइसेन्स नबनाइ दिएपछि उहाँले डराउँदै र लुक्दै लाइसेन्स बिनै २० महिना पानी बोक्ने ट्याङ्कर चलाउनुभयो ।
कम्पनीले नै गाडी चलाउन अह्राएपछि नाईं भन्ने ठाउँ रहेन । रोजगारीका लागि खाडीको देश साउदी पुगेका उहाँका लागि विकल्प पनि थिएनन् । लाइसेन्स बिना गाडी चलाउँदा प्रहरीले समाएर हिरासतमा राख्ने । लाइसेन्स नभई गाडी चलाएको अभियोगमा तीन पटक त उहाँ जेल बसेर निस्किनुभयो । त्यति गर्दा पनि उहाँले ५ महिनादेखि तलब पाउनु भएको थिएन ।
पूर्णबहादुरका लागि यी दुःख बिसाउने ठाउँ थियो, आफूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनी । पटक पटक आफूलाई साउदी पठाउने काठमाडौंको कान्तिपुर म्यानपावर सर्भिस प्रालिमा सम्पर्क गर्नुभयो, तर कम्पनीले उहाँका कुरा सुनेन । नेपाल फर्कन चाहे पनि फर्काइ दिएन । तलब सुविधा र लाइसेन्सका लागि पहल गर्नुको साटो म्यानपावरले कम्पनी मालिकको बुबाको मजरामा लगेर उँट गोठालो बनाइदियो ।
म्यानपावरले आफ्नो पीडा नसुनेपछि पूर्णबहादुरकी श्रीमतीले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी समेत गर्नुभएको छ । तर पूर्णबहादुरको नेपाल फर्कने दिन अझै निश्चित भएको छैन । समस्याका विषयमा साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा फोन र इमेल मार्फत जानकारी गराइएको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिकी कार्यक्रम अधिकृत शान्ति सिंह जानकारी दिनुभयो ।
यता कान्तिपुर म्यानपावरका प्रवन्ध निर्देशक धनलाल जैसीले भने कम्पनीले ‘एक्जिट’ नगरिदिएका कारण पूर्णबहादुरलाई नेपाल फर्काउन नसकिएको बताउनुभयो । कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लेवी लगायत पनि दावी गरेको उहाँको भनाई छ ।
हामीले फर्काउन सकेनौं, एम्बेसी पठाइदिनु भन्छ म्यानपावर : श्रीमती तिला
पूर्णबहादुरकी श्रीमति तिलाको गुनासो बेग्लै छ । भन्नुहुन्छ “ड्राइभरका लागि गएको मान्छेलाई उँट चराउन लगाइएको छ । एक लाख २० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई तिरेर जानुभएको हो । म्यानपावरले उहाँलाई फर्काउन केही पनि चासो राखेन । हाम्रो मान्छे नेपाल वापस गर्नुपर्‍यो भनेर म्यानपावरलाई भन्यौं ।
म्यानपावरका मान्छेले विभागमा आएर आफूले लिएको पैसा फिर्ता गरेर मान्छे नेपाल ल्याइदिने भनेको हो । अहिले त एम्बेसी जान भनिदिनु, अरु हामी बेहोर्छौं भनिरहेका छन् । छोराको कम्पनीबाट बाबुको कम्पनीमा लगेर छोडिदिएको छ रे । बालुवाघारीमा उँट चराउनु पर्छ रे ।
फर्काउन सकिएन, उहाँलाई नेपाल एम्बेसी जानु भन्नु भन्छन् म्यानपावरका मान्छेले । फर्काउन खोजेको हो, यताबाट फोन गर्दा साहुले फोन नै उठाउँदैन भनेर टार्छन् । बाहिरबाट एम्बेसीमा जान त्यति सजिलो पनि छैन रे । एम्बेसी पनि त्यस्तै हो ।“
“उहाँलाई फर्काउनका लागि चार पटक काठमाडौं पुगेँ । वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि उजुरी दिएकी छु । विभागमा उजुरी गर्दा पनि केही भएको छैन । म्यानपावरका मान्छेले विभागमा आएर आफूले लिएको पैसा फिर्ता गरेर मान्छे नेपाल ल्याइदिने भनेको हो । अहिले त एम्बेसी जान भनिदिनु, अरु हामी बेहोर्छौं भनिरहेका छन् । छोराको कम्पनीबाट बाबुको कम्पनीमा लगेर छोडिदिएको छ रे । बालुवाघारीमा उँट चराउनु पर्छ रे । छोराले पाँच महिनाको तलब पनि दिएको छैन । सम्पर्कमा आएको पनि छैन ।“
July 5, 2018, 9:27 p.m.
Yasta manpower nepal sarkarko chatrachayama hurkiyeka hun ra aile pani nepal sarkar kai surakchya ma basera janatalai thagne ani dukha dine ku kritya garne garna.
very heart touching story. keep on writing such real story continuously until it is heard far and wide and action is taken against culprit and victim is rescued.